သတင်း - အစိုင်အခဲသစ်ပရိဘောဂကိုသန့်ရှင်းအောင်ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲ။
၁။ သစ်သားပရိဘောဂများသုံးပါကနေရောင်တိုက်ရိုက်ထိရန်နေရောင်ခြည်ကိုရှောင်သင့်သည်။ ပြင်းထန်သောခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်သည်သုတ်ဆေးကိုအရောင်မှိန်စေပြီးသစ်သားပရိဘောဂများ၏အသွင်အပြင်ကိုထိခိုက်စေသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်အပူအရင်းအမြစ်၊ အပူဓာတ်၊ မီးအိမ်များနှင့်မီးအိမ်များနှင့်အခြားအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများသည်သစ်သားပရိဘောဂများပုံပျက်စေနိုင်သဖြင့်တတ်နိုင်သမျှဝေးဝေးနေသင့်သည်။ အပူလွန်လက်ဖက်ရည်မီးဖိုကဲ့သို့အရာဝတ္ထုများကရေနွေးအိုးကိုသစ်သားပရိဘောဂများပေါ်တွင်ထား ရှိ၍ အပူအစစ်အမှန်သစ်သားပရိဘောဂများလောင်ကျွမ်းမည်ကိုစိုးရိမ်သဖြင့်အပူလျှပ်ကာပြားကိုထည့်သင့်သည်။
၂။ သစ်သားပရိဘောဂအစစ်အမှန်များကိုသုတ်ရန်ပစ္စည်းတစ်ခု၏နူးညံ့မှုနှင့်ဝါဂွမ်းကိုသုံးသင့်သည်၊ ဝါဖျင်ကို micro wet ဖြင့်အကြံပြုသည်။ သစ်မာပရိဘောဂများကိုသုတ်ရန်သစ်သားများလိုက်နာရမည့်ကောက်ပဲသီးနှံ၏ ဦး တည်ချက်သည်ပရိဘောဂမျက်နှာပြင်ကိုယိုယွင်းစေနိုင်သဖြင့်အရက်နှင့်အခြားဓာတုဆိုးဆေးများနှင့်သန့်စင်ဆေးရည်ကို သုံး၍ မရပါ။
၃။ သစ်သားပရိဘောဂများကိုင်တွယ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်အလွန်သတိထားသင့်သည်၊ “ အလင်း”“ တည်ငြိမ်”“ ပြား” နှင့်ထိခိုက်မှုကိုအတတ်နိုင်ဆုံးခေါက်ခြင်းမှရှောင်ကြဉ်သင့်သည်။ အခဲသစ်သားပရိဘောဂများချထားသည့်ကြမ်းပြင်သည်အပြားဖြစ်သင့်သည်။
၄။ သစ်သားပရိဘောဂများအချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုပြီးနောက်ပရိဘောဂအလှကိုထိန်းသိမ်းရန်အတွက်အစိုင်အခဲသစ်သားပရိဘောဂများကိုဖယောင်းလိမ်းရန်အချိန်မီရပါမည်။ မရ။ သတိပြုရမည်မှာ glazing အရေအတွက်၊ waxing သည်မကြာခဏမပြုလုပ်နိုင်ပါ၊ တစ်နှစ်လျှင် ၁-၂ ကြိမ် သာ၍ ကောင်းသည်။
၅။ ပရိဘောဂမျက်နှာပြင်တွင်အစွန်းအထင်းများရှိနေလျှင်၎င်းကိုမပွတ်ပါနှင့်။ လက်ဖက်ရည်ပူပူကိုရေနွေးနွေးဖြင့်ညင်သာစွာဖယ်ရှားနိုင်ပါသည်။ အစိုဓာတ်ကုန်သွားပြီးနောက်မူလအစိတ်အပိုင်းသို့ဖယောင်းအနည်းငယ်ကိုသုတ်လိမ်းပြီးအကာအကွယ်ရုပ်ရှင်တစ်ခုအဖြစ်အကြိမ်များစွာပွတ်တိုက်ပေးပါ။
၆။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်သောအခါသန့်ရှင်းရေးကိရိယာများသည်ပရိဘောဂများနှင့်မထိပါစေနှင့်၊ ခဲသတ္တုပစ္စည်းများသို့မဟုတ်အခြားချွန်ထက်သောအရာများသည်ပရိဘောဂများနှင့်မတိုက်မိစေရန်နှင့်မျက်နှာပြင်အားခြစ်ရာများမှကာကွယ်မပေးပါနှင့်။
7. နွေရာသီတွင်အခန်းထဲတွင်ရေလွှမ်းမိုးပါကပရိဘောဂအစိတ်အပိုင်းများကိုမြေမှခွဲထုတ်ရန်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ပရိဘောဂအစိတ်အပိုင်းများကိုနံရံနှင့်ကပ်ထားပါ။ နံရံမှ 0.5-1 dm အကွာအဝေး
8. ဆောင်းရာသီတွင်၊ အပူခန်းမှ ၁ မီတာခန့်အကွာအဝေးတွင်ပရိဘောဂများထားခြင်းသည်အကောင်းဆုံးမှာရေရှည်ခြောက်သွေ့သောအဖုတ်ကိုရှောင်ခြင်း၊ ၎င်းသည်ဒေသတွင်းခြောက်သွေ့အက်ကွဲခြင်း၊ ကွဲကြေပျက်စီးခြင်းနှင့်ဆေးသုတ်ထားသောရုပ်ရှင်၏ယိုယွင်းခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။
နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်အစိုင်အခဲသစ်သားပရိဘောဂများသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင် ပို၍ လူကြိုက်များလာပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၎င်းကိုထိန်းသိမ်းရန်ကွဲပြားသောနည်းလမ်းများနှင့်ထင်မြင်ချက်များရှိသည်၊ သင်၏အကောင်းဆုံးထင်မြင်ချက်များကားအဘယ်နည်း။
Post တင်ချိန်: Jun-20-2021